UMTHANDAZO OYA KUMNTWANA WEZEMPILO NGOKUGULA KWEXESHA.
Umthandazo kumntwana wezempiloNgale posi siza kukubonisa lo mthandazo ukhethekileyo ukukunceda naloo mntu ugulayo ngaphakathi kosapho lwakho. Ke ndiyakumema, qhubeka ufunda ukuze uyazi.
1 Umthandazo kumntwana wezempilo
Umthandazo kumntwana wezempilo
La Umthandazo kumntwana wezempilo, ngumthandazo apho siza kucela uncedo lokuphilisa usapho kunye nabahlobo bethu abagulayo. Kwaye oko, ngokwenza ngokholo oluninzi, ummangaliso wokuphilisa owulindeleyo uya kwenzeka.
Siyazi ukuba xa unesizalwane sakho esigulayo, usizi nomsindo kukuhlasela kuba yimeko obungayilindelanga kwaye akukho mntu uyilindeleyo. Kodwa ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba asifundise ngento ethile, amaxesha amaninzi ekuqaleni asazi ukuba kutheni uThixo wethu evumele le nto ukuba yenzeke, kodwa uya kuba nezizathu zakhe kwaye mhlawumbi kamva uza kubazi.
Kodwa uninzi lwamaxesha, ezi meko zisizisela izifundo ezithile, ebesingasoze sibe nazo ukuba le meko khange yenzeke. Ke kunokuthiwa sisixhobo sikaThixo ukusivusa ngamanye amaxesha ebomini bethu, kusenza njengabantwana bakhe abangenakuzikhusela bajonge ezulwini ukucela uncedo lukaThixo ukusombulula le meko.
Ke umbuzo ekufuneka sizibuze wona kwezi meko kukuba kufuneka ndifunde ntoni koku? Ngamanye amaxesha uThixo usebenza ngeendlela ezingaqondakaliyo ukusibonisa indlela emasiyilandele, ngamanye amaxesha kungcono ukufunda phakathi kwemigca ukuze ubazi. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ungaze ulahle ukholo lwakho kunye naloo mntu ugulayo kwaye ufuna inkxaso nothando lwakho. Ngala maxesha apho indlela ijongeka imnyama yonke.
Ngesi sizathu, ndibonisa kuwe umthandazo wezempilo kwabo bagulela ukufa:
"Owu sithandwa kunye noMntwana oNgcwele onempilo weMpilo!, Mntwana wam endimthandayo, intuthuzelo yam enkulu: Ndiza ebusweni bakho ndisindwa yintlungu, ebangelwa sisigulo sam, kwaye ndiqhutywa kukuzithemba okukhulu, ukucenga uncedo lwakho oluvela kuThixo."
"Ndiyazi ukuba xa wawukulo mhlaba, uziva usizela wonke umntu osokolayo, ngakumbi abo babekhathazwa yintlungu."
"Ukwenzela yena infinito Uthando obekufanele ukuba ubanike lona, ​​ubaphilisile kwizigulo zabo kunye neentsizi zabo, kwaye imimangaliso yakho yayiyimbonakaliso ebonakalayo yokulunga kwakho, uthando olungapheliyo nenceba ”.
"Ngesi sizathu, Owu mntwana othandekayo wezeMpilo!, Mntwana wam endimthandayo, intuthuzelo yam enkulu, ndikucelile ngokuthobekileyo ukuba undiphe amandla ayimfuneko okuthwala iintlungu, isiqabu nentuthuzelo kwelona xesha linzima, kwaye, ngaphezulu kwako konke , ubabalo olukhethekileyo lokufumana amandla am, amandla am, impilo yam, ukuba kufanelekile ukulunga komphefumlo wam ”.
"Ndiza kukwazi ukukudumisa, ndiyabulela, kwaye ndikuncome ubomi bam bonke."
"Mntwana oyiNgcwele wezeMpilo: Ndiphe uncedo lwakho, ndinike ukuphilisa, umzimba, umphefumlo nengqondo, mntwana wam endimthandayo, intuthuzelo yam enkulu."
Ke isicelo masenzelwe umntu ogulayo, esenzela yena okanye somnye umntu, kwaye sithandaze ngalo lonke ukholo kunye nethemba, iinkolelo ezintathu, oobawo bethu abathathu nozuko ezintathu.
Kuthiwa ngoNovemba 12, 1939, kwisixeko saseMorelia. U-Miss María Guadalupe Calderón Castañeda ufumana isidlo sakhe sokuqala, isipho somfanekiso womntwana uYesu. Kwaye kwangalo mini usana olunguYesu lwenza ummangaliso wakhe wokuqala xa ithumba lalisemhlathini emlonyeni kadade wabo.
Lo mmangaliso wawusaziwa ngabo bonke el mundo ngabasemagunyeni becawa, bephumeza ezo tempile zininzi zakhiwa ngembeko yakhe. Xa kuziwa ekwamkeleni isixa semimangaliso kulo mfanekiso mncinci. Nge-21 ka-Epreli, 1942 yanikwa igama elithi "Umntwana oNgcwele uYesu wezeMpilo."
Umhla womthendeleko waminyaka le yiCawe yokugqibela ngo-Epreli, apho inani elikhulu lamakholwa liza kucela uncedo kusana olunguYesu lwezeMpilo. Ehlabathini jikelele lo mfanekiso unenani elikhulu lamakholwa kuwo kwaye nakwimimangaliso yawo enikiweyo ukuze uhlale uhlala undwendwela uhlawula izithembiso zawo kwihlabathi jikelele.
Kungenxa yoko le nto Umthandazo kumntwana wezempilo, yaziwa kwihlabathi liphela kwaye apho abantu abaninzi bayaqhubeka nokucela uncedo kwizalamane zabo ezigulayo. Ukuze ezi zinto ziphucule kwaye ziphilise kungekudala, ke musa ukuphulukana nokholo lwakho nikela isicelo sakho kumntwana onguYesu.
Ukuphelisa le post sinokuthi oku Umthandazo kumntwana wezempilo Inamandla ngakumbi ukuba uyayithandaza ngokholo ukufezekisa ukuphilisa umntu ogulayo onayo kwi-nucleus yentsapho yakho. Kwanga uThixo angayiva imithandazo yakho, aze umntu ogulayo aphile.
Rhoqo nge-21 yenyanga nganye kwenziwa umthandazo wokukhumbula usuku lo mfanekiso wathiywa ngalo, yiyo loo nto ndikumema, ukuba uthandaze emntwaneni uYesu ucela umhlobo wosapho lwakho ogulayo ngokholo olukhulu ukuba uyaviwa. Ukuze ummangaliso uqalise ukusebenza kuwe, kwiindaba ezintsha, ukhetho olutsha okanye ugqirha omtsha okunika impendulo oyifunayo kakhulu, ke musa ukuthandabuza ukubeka yonke intliziyo yakho xa uthandaza kuThixo umntwana.
Khumbula ukuba wonke umthandazo owenzayo ngokholo kwaye nentliziyo yakho isezandleni zakho, uThixo uyayiva imithandazo yakho kwaye uyakufumana indlela yokukunceda kwimfuno yakho, ungaze umthandabuze. Ngokuhlonipha ubizo lukaThixo wethu xa kufuneka njalo.